▷ IIVIKING RUNES: Iintsingiselo kunye neeRoll zeOracle yeRune
Fumanisa ukuba yintoni intsingiselo yentsingiselo Runes IiViking ngemvelaphi yeNordic. Ngolu hlobo lwee-runes ungenza uvavanyo lwakho ukuze ufumane ukuba ikamva likuphatheleni kwaye uliqonde ngcono ixesha lakho elidlulileyo.
1 Yintoni iViking Runes?
2 I-Oracle yeViking Runes
3 Imbali yeRunes yeeViking
4 Ithetha ukuthini iViking Rune?
5 Ukujikeleza simahla kweeViking Runes
5.1 Uyenza njani imbaleki yemvelaphi yeViking?
5.2 Apho ukugcina runes?
Yintoni iViking Runes?
IiViking Runes, okanye ezaziwa ngokuba ziiNorse Runes, ngoonobumba abangoonobumba okanye abaziwa ngcono njenge Futhorc, apho iisimboli zazikrolwe kwiithokheni zamatye.
Olu hlobo I-alfabhethi yaseScandinavia yaseFuthark Namhlanje kunye nele mihla ineeleta ezili-16 (ii-runes), kodwa kweyakudala, ekuqaleni, yayineembaleki ezingama-24 apho zazisetyenziselwa iinjongo zokuvumisa.
I-Oracle yeViking Runes
Las IViking Runes Simahla ijikelezisa Ungazifumana zifumaneka kwiwebhusayithi yethu, ukuprinta okupheleleyo kwenziwa ngokulula kwaye sikubeka kwindawo onayo Intsingiselo yerune nganye yeViking.
Olu sasazo lusetyenziswa ngokubanzi iimboni kunye nabafundi be-tarot kumaxesha amandulo, kwaye nanamhlanje olu hlobo lwethotothi lusaphoswa. Masibone kancinci malunga Imbali yeViking Runes.
Imbali yeRunes yeeViking
Njengoko besesiphawulile ngaphambili, kwimvelaphi ezi runes (ziileta) ziyinxalenye ye- i-alfabhethi yokubalekaKodwa zafunyanwa njani kwaye zazisetyenziselwa njani ukuvumisa?
Imvelaphi ibuyela kwi Amazwe aseScandinavia kunye neBritish Isles, nangona inemvelaphi yaseJamani. Kodwa yasasazeka nakwiYurophu yonke iminyaka eyadlulayo kumaXesha Aphakathi.
Nditsho imibhalo yafunyanwa eYurophu ukusukela nge-100 AD ukuthandana ukususela ngenkulungwane XNUMX.
Olu hlobo loonobumba lusasetyenziswa kwiindawo ezisemaphandleni kulo lonke elaseSweden, bambalwa abantu abayaziyo inguqulelo yokoqobo ye ikhalenda yokubaleka kunye nemibhalo ekwiYurophu iphela.
Ithetha ukuthini iViking Rune?
Igama Runa kuvela BALEKA (ithatha ukuba imfihlo) en Ulwimi lwesiGothic, kunye Iinjongo ithatha ukuba "Umbongo«. Njengoko nisazi kakuhle, iirunes yayizii Esona sipho sikhulu sanikwa nguThixo uOdin kubo bonke, ihlala isekwe kwi- Iintsomi zaseScandinavia kunye nencwadi yomlingo «IGaldrabok«.
Kodwa ukuba awuyazi into ethi «IGaldrabok", yincwadi kubhalwe kumaXesha Aphakathi kucetyiswa phi ukusetyenziswa kwezi runes, zonke iisimboli kunye neeleta zabo, ukwenza umlingo.
Ukujikeleza simahla kweeViking Runes
Le nkqubo yokuvumisa yemvelaphi yaseScandinavia iya kusivumela Thelekelela ikamva usebenzisa ii-oracle.
Indlela esichaza ngayo ukubaleka iyahluka ngokuxhomekeke kwindlela yethu yokucinga, ihlala isekwe kwi Intsingiselo yeroni nganye (apha ngezantsi unentsingiselo nentsingiseloSingaqhubeka nokubumba iimpendulo abasinika zona.
Uyenza njani imbaleki yemvelaphi yeViking?
Ukuze ubugcisa bokubhula Imiqolo yeViking Ukusebenza ngokufanelekileyo, isiko licebisa ukuba iirune zenziwe ngamatye omlambo. Abadala bayila kwaye benza ii-runes ngezandla zabo ngokuqokelela amatye kwimilambo ababebanga ukuba yiyo Ngcwele nguThixo uOdin.
Apho ukugcina runes?
Nje ukuba Iimpawu ze-oracle Azisetyenziswa kwaye sifuna ukuzigcina, zonke ziya kufuneka zibekwe kwingxowa yelaphu okanye kwilaphu elimnyama.
Ukuba ufuna uncedo olukhethekileyo kunye nolugqibeleleyo, nxibelelana nathi sonke iimboni kunye neetarotistas.